Mafana Fo Iray Nosamborina Noho Ny Fiampangàna Ho Nanompa Sy Nizara Lahatsoratra Momba Ny Mpanjaka Vaovao ao Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2017 2:34 GMT
Pikantsarin'ny lahatsoratry ny BBC Thai momba ny mpanjaka vaovaon'i Thailandy .
Amin'izao fotoana izao, adihadian’ny governemantan'i Thailand ny ekipan'ny British Broadcasting Corporation (BBC) noho ny namoahany ny zavatra ‘diso’ mombamomba ny mpanjaka vaovaon'ny firenena.
Mampihatra lalàna henjana momba ny faniratsiràna (ompa atao amin'ny mpanjaka) i Thailand , izay mandrara ny vahoaka tsy hitsikera ny fitondram-panjaka tokana. Ny fitorohana tsotra any amin'ny manampahefana ny fanitsiràna mpanjaka dia ampy hanerena ny polisy mba hanokatra fanadihadiana. Ireo hita fa meloka noho ny tsy fanajana ny fanjakana dia mety hiditra am-ponja hatramin'ny 15 taona.
Nodimandry tamin'ny Oktobra lasa teo i Bhumibol Adulyadej, mpanjakan'i Thailand rehefa nipetraka taompolo im-pito teo amin'ny seza fiandrianana. Ny zanany lahy no lasa Mpanjaka Vajiralongkorn, Rama X tamin'ny 1 Desambra lasa teo.
Andro iray taorian'ny niakaran'ny Mpanjaka Rama X teo amin'ny seza fiandrianana, namoaka tantaram-piainana fohin'ilay mpanjaka vaovao ny BBC Thai, izay vetivety dia niparitaka tamin'ny haino aman-jery sosialy. Tao anatin'ny andro vitsy monja, nahazo ‘tiako’ miisa 27 000 ilay lahatsoratra ary ‘nozarain'ny mpampiasa Facebook 2500.
Iray amin'ireo nizara ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook ilay mpikatroka Jatuphat Boonpattaraksa. Nosamborina tamin'ny 3 Desambra izy noho ny filazana fa nanitsakitsaka ny andininy faha 112 amin'ny Fehezan-dalàna mifehy ny heloka bevava, na ny lalànan'ny faniratsiràna mpanjaka. Nafahana izy tatỳ aoriana, rehefa avy namoaka antoka.
Jatuphat Boonpattaraksa (faharoa avy aty ankavia) dia tafahaona indray amin'ny fianakaviany taorian'ny nahafahany avy any am-pigadrana. Sary avy amin'i Prachatai.
Tsy mazava ny antony mahatonga ilay lahatsoratry ny BBC Thai noheverina ho manivaiva ny mpanjaka vaovao. Taorian'ny fisamborana an'i Jatuphat Boonpattaraksa, ireo Thai mpampiasa aterineto, ary na ny mpanao gazety aza dia tsy nisy naneho hevitra momba ny votoatin'ilay lahatsoratry ny BBC.
Fa raha mitovy amin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny BBC amin'ny teny anglisy ilay tantaram-piainana navoakan'ny BBC Thai, angamba tsy faly ireo manampahefana ao Thailandy nahafantatra fa niresaka momba ny fanambadiana, ny fisaraham-panambadiana sy ny torohay manokana momba ny mpanjaka vaovao ny BBC. Voaresaka fohy ao anatin'ilay lahatsoratra ny sasany amin'ireo resabe efa lasa nahatafiditra ny mpanjaka vaovao. Na efa fantatry ny vahoaka any Thailandy aza izany rehetra izany, dia tsy noresahina tany amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra, amin'ny oniversite, fa indrindra any amin'ny birao.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny BBC fa manaraka ny fitsipiky ny vondron'ny haino aman-jery ilay lahatsoratra nozaraina tao amin'ny BBC any Thailandy.
Ankoatry ny fisamborana an'i Jatuphat Boonpattaraksa, nanome baiko ireo Mpamatsy Aterineto ao an-toerana ny Minisitry ny Toekarena Nomerika sy ny Fiarahamonina mba handrara ilay lahatsoratra. ‘Nitsidika‘ ny biraon'ny BBC Thai koa ny polisy, fa nihidy io tamin'io andro io.
Marika famantarana volombatolalaka no nandrakotra ny varavaram-pitaratra mihidin'ny biraon'ny BBC ao Bangkok , izay tsy ahitana famantarana intsony. #Thailand # LM # BBCThai pic.twitter.com/jyWqD8nAMJ
Ny hoe nosinganin'ny polisy ny mafana fo iray nosamborina noho ny ‘faniratsiràna’ dia noraisin'ny vondrona maro ho toy ny fomba iray nampiasan'ny governemanta ny lalàna mba hanakendàna ny mpanohitra.
Tamin”ny 2014, norombahan'ny miaramila ny fahefana, ary noraràny ny fihetsiketsehana, hatramin'ny fanenjnanana ny fifehezana ny haino aman-jery. Namolavola lalàm-panorenana iray vaovao izy tamin'ny taona 2016 mba hanamboaràna ny làlana hamerenana amin'ny laoniny ny fitondrana sivily, fa niantoka ihany koa ny fifehezan'ny miaramila any amin'ny sampana rehetra ao amin'ny governemanta izy.
Ny tambajotra iLaw , izay namporisika ny fanitsiana ilay lalàna momba ny ‘faniratsiràna mpanjaka, dia nanazava ny fomba nandrodanan'ilay lalàna jadona ny fahalalahana maneho hevitra ao Thailand:
Nalentiny tao an-tsain'ny fiarahamonina manontolo ny hevitra hoe ny fanjakana dia tsy azo kitihana ary tsy azo resahana, ary ny vahoaka dia heverina fa tokony hanivanana ny tenany. Tokony hitandrina fatratra rehefa miresaka ny olana mikasika ny fanjakana, indrindra mandritra ny resaka manokana sy ny firesahana am-pahibemaso. Nampihena be ny fahalalàn'ny vahoaka sy ny fahatakarany ny momba ny fanjakana ny fepetra tahàka izany.